Sida loo cabbiro JPG-ga iPhone-kaaga | BehMaster
Bogga ugu weyn/iPhone/Sida loo cabbiro JPG-ga iPhone kaaga
Weligaa ma rabtay in aad wax ka beddesho sawirka ka hor inta aanad dirin, ama ku dhejin shabakada? Sida ugu dhaqsaha badan uguna fudud ee tan loo sameeyo waa iyada oo la gooyo. Oo xataa way ka dhaqso badan tahay oo way fududahay sababtoo ah mar hore ayaan kuugu soo qoray. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa wadaaga sawirka gudaha abka Sawirada, dooro jidkan gaaban, oo aad ayaad u qurux badan tahay. Iska hubi.
Iska yaree sawirada Jidka-gaaban
Waxaad u habayn kartaa jidkan gaaban baahidaada.
Kani waa jid gaaban oo toosan. Waxay u aqbashaa sawirada sida gelinta, way bedeshaa, ka dibna way badbaadisaa. Sida ay ugu muuqato sawirka kore, sawirka ka soo baxay waxa lagu kaydiyaa maktabada Sawirada, goobta iCloud Drive, oo lagu koobiyeeyay sabuuraddaada. Waad ka saari kartaa (iyo malaha waa inaad) ka saartaa kuwa aadan rabin. The Waydii Marka Orod doorashada ee Bedel sawirka tallaabo ayaa soo bixi doonta sanduuqa wada-hadalka si aad u geliso cabbirka cusub.
Waxaa jira hal tafatiran oo kale oo la xuso: Waxaan ku daray a Ku celi mid kasta loop si aad tan ugu socodsiiso sawirro badan hal mar. Kaliya la wadaag toban sawir, tusaale ahaan, ku socodsii jidkan gaaban, dhammaantoodna hal mar ayaa la rogi doonaa. Iyadoo ku xiran sida natiijooyinka loo keydiyo, waxaa laga yaabaa inaad doorato meel aad u socoto. Waa inaad sidoo kale u doorataa cabbir mid kasta.
Waxa aan haystaa hal jid gaaban oo aan waxba samaynayn aan ka ahayn in aan cabbiro sawirada 2,000 pixels, oo aan ku xafido app-ka shelf, Yoink. Sababtoo ah ma aha inaan sameeyo wax go'aan ah, waxay ku socotaa iyada oo aan la falgelin. 2,000 pixels waa cabbirka ugu wanaagsan ee lagu daabaco Cult of Mac.
Kani waa jid gaaban oo fudud oo aad adigu samayn karto. Isticmaal shaashadda si aad tixraac u hesho oo la soco.
Ka dib markii aan isku tuuray midkii, waxaan ku yara jeexjeexay caanaha. Noocani wuxuu akhrin doonaa ballaca sawirka gelinta, oo wuxuu kugu tusi doonaa sanduuqa wada-hadalka caadiga ah. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad ogaato ballaca asalka ah, si aad si fudud u go'aansato cabbirka cusub:
Nooc aad u adag.
Way ka yara adag tahay, si aad halkan u soo dejisan karto.
Soo deji taas, nuqul ka samee (haddii aad samayso isbeddel wax kasta jebiya) oo habayn jidka gaaban si uu ugu habboonaado baahiyahaaga. Ku raaxayso!
Sida Loo Sameeyo Wallpapers Mobile Si Aad ula Wadaagto Taageeryaashaada Instagram-ka